CTD : fiaraha-miasa amin’ny vondrom-paritra frantsay | NewsMada
CTD : fiaraha-miasa amin’ny vondrom-paritra frantsay
Misy ny fiaraha-miasan’ny Vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (CTD) sasany eto amintsika sy ny any Frantsa. Hotohizana sy hitarina izany mba hitondra fampandrosoana eny ifotony.
Nivory ny alakamisy teo ny filohan’ny faritra 22 niaraka tamin’ny mpikambana ao anatin’ny vaomiera mpandrindra ny fivoriamben’ny Fiaraha-miasa iraisam-pirenena eo amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana malagasy sy ny frantsay (AICT), andiany faharoa.
Fanomanana ny fivoriamben’ny AICT, hatao eto Antananarivo ny 5-7 marsa ho avy izao. Ankoatra ny fihaonana, hamelabelatra ny mombamomba sy ny mampiavaka azy avy ny faritra tsirairay 22 eto amintsika.
Tanjona ny hikarohana fijery iombonana hisin’ny fiaraha-miasa. Nilaza ny lehiben’ny faritra (CR) Analamanga, Rakotonanahary Ndrantonomena, fa efa niara-niasa tamin’ny faritra Champagne-Ardenne any Frantsa ny faritra Analamanga, hanatsarana ny fambolena any amin’ny distrika Ambohidratrimo. Nahafa-po ny fiaraha-miasa, ary hitarina amin’ny sehatra hafa, toy ny tetikasa mifantoka amin’ny tanora, satria manodidina ny 17 taona ny salan-taon’ny mponina ao amin’ny faritra Analamanga.
Jono sy famokarana « huitre »
Miara-miasa mivantana amin’ny vondrom-paritra frantsay koa ny faritra na kaominina (CTD) hafa eto amintsika. Nambaran’ny lehiben’ny faritra Anosy, Razafindramaro Julio, fa hohavaozina ny fiaraha-miasany amin’ny faritra iray any Frantsa sy atsy La Réunion, nifantoka amin’ny jono, ny famokarana masajy (huitre) any Taolagnaro. Nisy fotoana niato ity fiaraha-miasa ity fa hohavaozina indray sady hikaroka seha-pihariana hafa koa amin’ity fihaonana ity, toy ny fanavaozana fotodrafitrasa.